मेहनत जुन देशमा गरे पनि सानो तिनो फल पाउछ नै, अष्ट्रेलिया भन्दैया यहाँ डलर फल्ने रुख छैनन ! बिदेशमा भएकाले एक पटक पढ्नै पर्ने - All Nepal
मेहनत जुन देशमा गरे पनि सानो तिनो फल पाउछ नै, अष्ट्रेलिया भन्दैया यहाँ डलर फल्ने रुख छैनन ! बिदेशमा भएकाले एक पटक पढ्नै पर्ने
नेपाली विद्यार्थीको सुनौलो गन्तब्य बनेको अस्ट्रेलयामा यतिखेर विलार्थीको भीड् निकै बढेको छ। यहाँ पढ्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको वरियतामा नेपाल तेस्रो नम्बरमा पर्छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
अहिले करिब तीस हजार नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलियाका विभिन्न कलेजमा अध्यनरत छन्। चाप बढ्दै गए पछि समस्या पनि बिस्तारै बढ्न थालेको छ।
पछिल्लो वर्षमा विद्यार्थीको समस्या बढ्नु संख्यात्मक रूपमा ठिकै भए पनि यसको पछिल्ला रूपहरू फेरिदै गएका छन्।
‘सही सल्लाह र सुझाब अनि गच्छ अनुसारको पढाइ अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो,’ माइ पर्सनल एजुकेसन कन्सल्ट्यान्ट (माइपेक) का शैक्षिक परामर्शदाता ध्रुब दाहालले भने।
रजिष्टर माइग्रेशन एजेन्टका रुपमा अनुभव संगालिसकेका दाहाल भर्खरै मात्र सिडनीको बजारमा माइपेक लिएर आएका हुन्।
संख्यात्मक रूपमा ह्वात्तै वृद्धि हुँदा साना तिना समस्या देखिएलान् तर जानकारी नलिइ बिदेशीने युवा जमातको फरक समस्या देखिन थालेको दाहालको भनाई छ। ‘विदेश पठाउँदैमा ढुक्क हुने अभिभावक र विदेसिएपछि सबै पाइन्छ भन्ने पुस्तालाई हामीले सही सल्लाह र सुझाब दियौं भने मात्र हामी सही मानेमा शैक्षिक परामर्शदाता बन्नेछौ,’ उनले भने।
सिड्नीको पीट स्ट्रीटमा माइपेक लिएर आएपछि दाहालले धेरै खाले गुनासा र अनुभव बटुले। ‘अष्ट्रेलियामा रूखमा डलर फल्दैन, परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अरुको कुरामा भन्दा आफ्नो थैली अनुरूपको शैलीमा अगाडि बढनुपर्छ।’
नेपालमा अस्ट्रेलिया जाने भनेपछि कहाँ, कसो, के सम्भावना र अन्य विषयमा अध्ययन नगरि आउने विद्यार्थी बढी समस्यामा परेका हुन्छन्। ‘जसले बुझेर, सुनेर र पढेर आएका छन् उनीहरू त्यसका लागि शारीरिक र मानसिक तयारी हुन्छन्। जसले यहाँको परिवेश, काम र पढाइ र स्थानका बारेमा अर्ध जानकारी पाएका हुन्छन् ,समस्या त्यही बढि हुन्छ।’
यसअघि शम्सेर एन्ड एसोसीयट्समा आवद्ध भइसकेका परामर्शदाता दाहालको शब्दमा भन्ने भने एजुकेशन वा माइग्रेशन दुवै सेवाका इमान्दार हुनेको पीठो बिक्ने पक्का छ।
सिड्नीको शैक्षिक परामर्शको बजारमा राम्रो काम र उचित दाम अहिलेको आवश्यकता रहेको दाहालको ठहर छ। नहुने कामलाई हुन्छ भन्ने र केही पैसामा विलार्थीको भबिष्यमाथि खेलवाड गर्नेको दिन अब सकिएको उनले दाबी गरे।
‘जसले विद्यार्थीलाई सही सूचना र सल्लाह दिन्छ अनि सही मार्गमा डोर्‍याउँछ त्यसैको कामलाई सबैले सलाम गर्नेछन्,’ दाहालले बताए।
दाहालले अस्ट्रेलियाको अध्यागमनमा दिनहुँ हुने नीति नियम परिवर्तन र नयाँ नयाँ कानुनका विषयमा पनि स्पष्ट ज्ञान राख्नु परामर्शदाताहरुको कर्म भएको बताए।
नेपालमा परामर्श केन्द्र चलाउन कुनै योग्यताको कसी नभएको र राज्यले यस बिषयमा कडा नीति नअपनाउँदा विद्यार्थी गलत सल्लाहको चपेटामा परेको दाहालको तर्क छ।
‘धेरै राम्रा मानिसहरू पनि यस पेशामा छन् तर, केही खराब मानिसको कामले पेशालाई कताकता मानिसहरुको नजरमा गिराउने काम गरेको छ,’ दाहालले सुनाए ।
विदेश आउने नयाँ पीडिलाई दाहालको एउटै शन्देश छ, नबुझिकन विदेश आउनु भनेको दुःख पाउनु हो, अस्ट्रेलियामा उच्च अध्ययनमा आउने हो भने कमसेकम कुन विश्वविद्यालयमा आउने, कुन ठाउँमा आउने, त्यहाँको वातावरण, काम, डेरा अनि शूल्कका विषयमा स्पष्ट भएर आउनु होला।
ध्रुब दाहाल, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेन्ट
साभार : सेतोपाटी बाट